China ogbe Type Waste Taya Pyrolysis Plant factory na-emepụta | LYBH
Usoro pyrolysis bu otu n’ime uzo zuru oke ma nwekwaa uru di elu n’ilezi oria ahihia ahihia. Site na teknụzụ pyrolysis nke akụrụngwa ihe mkpofu ahihia, akụrụngwa dị ka taya na mkpofu ahihia nwere ike ịhazi iji nweta mmanụ, waya ojii na waya nchara. Usoro a nwere njirimara nke mmetọ efu na mkpụrụ mmanụ dị elu.
1. Mepee ụzọ: adaba na ngwa ngwa loading, ngwa ngwa jụrụ, adaba na ngwa ngwa waya si.
2. coolingnọdụ oyi nke condenser, elu mmanụ mmepụta ọnụego, ezi mmanụ mma, ogologo ọrụ ndụ na mfe ihicha.
3. Mmetụta mmiri mbụ na mwepu ájá: Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè wepu acid gas na ájá, ma zute ụkpụrụ mba dị mkpa.
4. Mwepu na-apụ n'anya n'etiti ọnụ ụzọ ọkụ ahụ: airtight, akpaka deslgging, dị ọcha na ájá-free, na-azọpụta oge.
5. Nchedo: teknụzụ ịgbado ọkụ arc na-ekpuchi mmiri, nyocha ultrasonic na-enweghị mbibi, akwụkwọ ntuziaka na ngwaọrụ nchekwa akpaka.
6. Iyuzucha gas mgbake usoro: zuru ezu ọkụ mgbe mgbake, ịchekwa mmanụ ọkụ na igbochi mmetọ.
7. Direct kpo oku: Usoro pụrụ iche na-eme ka mpaghara kpo oku nke ikuku ahụ dị elu, ọnọdụ okpomọkụ na-ebili ngwa ngwa, na ọnọdụ okpomọkụ dị mfe ịchịkwa, na-agbatịkwu ọrụ nke akụrụngwa.
8. Unique thermal mkpuchi shei imewe: ezigbo ihe mkpuchi mkpuchi ọkụ, mmetụta dị mma na-azọpụta ike.
Na dum tayaa na-ebuga ya na pyrolysis chernobyl site na nhazi modul, mkpuchi na-akpaghị aka na-ekpochi ma mechie, mgbe ahụ dum taya na-pyrolyzed; mgbe ọgwụgwọ pyrolysis ahụ gasịrị, alụlụ mmanụ na-ehichapụ, mmanụ na gas na-agafe na ọkụ na nkewa mmanụ na gas. Mmanụ na gas na-abanye na sistemụ na-ekpo ọkụ, akụkụ a na-aqueụ mmiri na-abanye n'ime mmanụ taya, akụkụ a na-enweghị ike ịbanye bụ sistemụ kpo oku maka ọkụ ọkụ site na usoro nhicha gas. Mgbe emechara usoro mmanụ na gas pyrolysis, ihe fọdụrụ carbon ojii na waya nchara na-akpaghị aka site na sistemu mwepu akpaka zuru ezu.
The pyrolysis chernobyl adopts Ọdịdị nke okpomọkụ nchekwa ahu ka n'ụzọ zuru ezu egweri n'efu okpomọkụ, nke nwere ike ọ bụghị naanị ịgbatị ọrụ nke nnukwu ọkụ, ma na-azọpụta fuel.Thus n'ihu ịzọpụta mmepụta akwụ ụgwọ
2. Pụrụ iche elu-okpomọkụ àmà mma ite na-eji maka chernobyl.
3. Akụrụngwa nwere ịdọ aka na ntị infrared igbochi yana ngwaọrụ dredging, nke nwere ike ịchọpụta ihe ọhụụ nke pipeline pipeline na usoro mmepụta ma dozie nsogbu nke mgbochi, iji hụ na enweghị nsogbu nchekwa ọ bụla n'ihi mgbochi pipeline na usoro mmepụta.
4. Ọdịdị okirikiri abụọ ka a nakweere na usoro ịchapu mmiri, nke na-achịkwa oge iwepụ ihe dịka ihe dị ka awa 2. A na-ehichapụ slag ngwa ngwa.
5. Nabata usoro mkpochapu ikpochapu ikuku ohuru iji mee ka ikuku na-agbaputa mgbe obula ocha choro ihe ndi ozo choro
6. Mgbe akpịrị ịkpọ nkụ gasịrị, mwepụ sọlfọ na mwepụ na-adịghị ọcha na sistemụ mkpocha, a na-ejikọ gas na-ere ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-echekwa ya na tank nchekwa gas. Enwere ike iji ya maka kpo oku ma emechaa, ma ọ bụ nye ya ndị na-enye ọkụ gas maka iji ma ọ bụ ọrịre.
7. Tinye convection vents na ngwa ngwa jụrụ ngwa na isi ọkụ, nke mere na okpomọkụ nke isi ọkụ nwere ike belata n'okpuru 100 ogo na 2 awa.
Ihe na-arụ ọrụ
Ogbe pydị pyrolysis osisi
Ihe mkpofu ahihia
Nmeputa mmanu 24-hour
Direct kpo oku
(Pipe eriri igwe)
Ohere ala (tank)
1. Akụrụngwa Maka Igwe Pyrolysis
2. Akwụsị ngwaahịa pasent na ojiji
* Enwere ike ire ya ozugbo.
* Nwere ike iji distillation akụrụngwa iji nweta mmanụ ụgbọala na dizel.
* Enwere ike iji ya mee mmanụ.
* Carbon nwa ịnụcha ihe ngwa ngwa nwere ike iji mee ezigbo oji.
* Carbon nwa granulation akụrụngwa nwere ike iji mee ihe.
* Hydraulic baling igwe nwere ike iji mee nchara nchara maka njem na nchekwa.
* Enwere ike iji ya dị ka mmanụ ọkụ.
* Enwere ike ịchekwa gas na-emefu site na usoro nchekwa.
3. Ihe dị na mmanụ maka nhazi pyrolysis
Mmanụ (mmanụ mmanụ, mmanụ taya, mmanụ dị arọ wdg.)
Carbon nwa pellet
a. N'ịnabata akpaka emikpu-aak ịgbado ọkụ technology
b. A ga-achọpụta usoro ịgbado ọkụ ahụ niile site na usoro nnwale ultrasonic na-enweghị nhịahụ iji hụ na ịgbado ọkụ na ụdị ịgbado ọkụ.
a. Standardkpụrụ Ọpụpụ: N'ịnabata gas scrubbers pụrụ iche iji wepụ gas acid na uzuzu anwụrụ ọkụ
b.Smell n'oge ọrụ: Ofụri Esịt nchọ n'oge ọrụ
d. Mgbawa siri ike: ihe siri ike mgbe pyrolysis bụ obere carbon ojii na wires nchara nke nwere ike ịmalite ma ọ bụ ree ya na uru ya.
Nke gara aga: Na-aga n'ihu ahihia Taya Pyrolysis Osisi
Osote: Factory Price China Scrap Taya Waste Rubber Recycling Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi 50tpd
Ogbe Pyrolysis Osisi
Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi
Crumb Rubber Ndọtị Ngwa
Pyrolysis Osisi Enyi na Enyi na Enyi
Pyrolysis Enyi na Enyi na Enyi Gburugburu
Ofụri Esịt Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi
Plastic imegharị ihe
Igwe na-ebugharị Taya
Pyrolysis Na-emegharị Taya
Taya Na-ebelata Palnt
Igwe Mgbuji Taya
Taya Mulch egweri Palnt
Palnt na-emegharị Taya
Ejiri Taya eji eme ihe
Imefusị Taya Recycling Machine
Pyrolysis Na-emegharị Anyi
Ogbe Pyrolysis Osisi, Imefusị rọba, Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Taya Pyrolysis, Imefusị Taya Recycling Machine,